The bushing - China Kanaif muridzo unoridzirwa
Zviri hukuru pamusoro the bushing:
Specification kuti the bushing:
The equipments kubva DISA Denmark, DJ AMF Japan, SINTOKOGIO Japan zvinowanzoshandiswa yedu nyore kufurirwa simbi panosangana productline, dzinovimbisa kutsiga chigadzirwa yepamusoro.
Tinoshandisa spectrometer kubva Oxford Instruments kuongorora unhu mashoko wacho.
Tinoshandisa yakakwirira kupisa ukoshi negasi annealing chamatare, vakaraira kudzora annealing kwacho, kuvandudza ehupfumi pakati zvinhu zvinooneka.
Mumwe nyere zvakakodzera the bushing pashure mhepo tightness bvunzo, nechokwadi hapana leakage.
Mukanyatsochengeta kudzora caliber ari shinda, parallelism, Angle, zino mhando, mumwe vanogara pamusoro chivhariso geji kunovhenekwa.
Nenyere Fittings vane nehoro kubvira 1/8 "kuburikidza 6.
kusimba zvakanaka refu upenyu rishande.
Smooth pamusoro pasina chinhu jecha buri.
Avg. Ukobvu zingi unhani riri kupfuura 86 neIkoniyumu raanotaura ASME, EN (70um), Din (70um), SI (78um).
Previous: Chigadziko R / L
Next: the bushing
1/2 Male Female the bushing
241 the bushing
Kandai Iron nyore kufurirwa-the bushing
GI Hex the bushing
Hdpe the bushing
Insulated Plain Type the bushing
Nyore kufurirwa Iron Threaded the bushing